DAAWO: Raila Odinga oo shil halis ah ku sigtay & sida sibiqda ah ee uu ku baxsaday + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DAAWO: Raila Odinga oo shil halis ah ku sigtay & sida sibiqda...
DAAWO: Raila Odinga oo shil halis ah ku sigtay & sida sibiqda ah ee uu ku baxsaday + Sawirro
(Kisumu) 30 Maajo 2021 – Dayuurad ayaa burburtay in yar uun kaddib markii ay meel gaysey hoggaamiyaha ODM ee Raila Odinga oo ay dhigtay Siaya County, halkaasoo uu MW Uhuru Kenyatta galabta ka furay mashaariic horumarineed.
Dayuuradda oo ah nooca ”Daba-mallaayda” ay Soomaalidu u taqaan, ayaa halkaa gaysey Odinga iyo 4 la socotey, taasoo ka dhigan inuu nasiib lahaa oo uu shil halis ah ka badbaadey maalinta 1-aad ee booqasho 3 maalmood ah oo uu ku tegey Nyanza.
Dayuuraddan oo ah kuwa qumaatiga u kaca, Bell 407, oo ku diiwaan gashan 5Y-PSM, ayaa Mr Odinga gaysey Kudho Primary School oo ku yaalla tuulada Usenge ee beesha Onyinyore Sub-Location, South Gem, balse mar ay isku dayday inay kacdo si ay boos ugu bannayso dayuurado kale ayay dhulka qare ku noqotay kaddib markii ay 5 mitir dhulka ka kacday iyadoo dhanka bidix u seexatay kana burburtay marawaxadda wayn iyo dabada.
Shilku wuxuu dhacay galabta 4.30pm, iyadoo uu xabadka ka sheeganayo Peter Mbeka oo ahaa rakaabkii saarnaa.
Mr Odinga waxaa sidoo kale la socdey madaxda maxalliga ah sida Barasaabka Kisumu, Md Anyang Nyong’o, isagoo MW Kenyatta kusoo dhoweeyey Garoonka Kisumu International Airport halkaasoo uu kasoo degey in yar kaddib 3:00 PM, iyagoo deeto kala qaatay laba dayuuradood oo u qaaday Gem, Siaya County.
Sida uu sheegay Afhayeenka Raila oo ah Mr Onyango, ma jirto cid wax wayn ku noqotay dayuuradda oo ay xilligaa saarnaayeen hal duuliye iyo hal qof oo rakaab ahaa, balse waxaa jira dhaawacyo yar.
“Mr Odinga wuxuu toos usii watay howlihii ay u yimaadeen isaga iyo Madaxwaynuhu.” ayuu yiri.
Kenya ayay badanaa ka dhacaan shilal dayuuradood oo ay dad madax ihi ku dhintaan, kuwaasoo aan sharraxaad laga bixin. Prof. George Saitoti ayaa ugu dambeeyey siyaasi ku dhinta.
Previous articleXOG: Madaxtooyada oo Isbeddel maamul ku samayn karta Wasaaradda Warfaafinta & muran ka dhalan kara (RW Rooble oo…)
Next articleWeriye caan ah oo ESPN ka tirsan oo si xun ugu digtey kooxda Manchester City (Muxuu yiri?)